Gudoomiyaal degmo & Taliyaal boolis oo tababar looga furay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ilaa 9 ka mid ah gudoomiyaasha degmooyin dhawaan laga saaray Alshabaab iyo taliyaasha saldhigyada booliska degmooyinkaa ayaa maanta Muqdisho looga furay tababar.
Siminaarka oo socon doono muddo isbuuc ah ayaa inta uu socda waxaa lagu baran doonaa maamul wanaaga iyo hogaaminta.
Tababarka oo manta ka furmay dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kaahiye ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradaha Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka.
Wasiir ku-xigeenka Amniga Qaranka, Ibraahim Isaaq Yarrow ayaa sheegay in Wasaaradda amniga ay xoogga saari doonto sidii goobaha laga Al-Shabaab saaray ay u gaarsiin laheyd sarakiil xagga amniga ah, tanina ay qeyb ka tahay qorshaha Wasaaradda amniga ay ugu talo gashay gobollada Al-Shabaab laga saaray.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka Cabdullaahi Goodax Barre oo furay tababarka la siinayo guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo taliyeyaasha oo socon doono muddo isbuuc ah ayaa kula dar daarmay inay si hufan u gutaan howlaha loo igmaday, isagoo xusay in Wasaaradda Arrimaha gudaha ay dardargelin doonto maamul u sameynta degmooyinka iyo gobollada lagala wareego Al-Shabaab.
Waa markii ugu horreysay ee tababar nuucaan ah Muqdisho looga furo gudoomiyaaha degmooyinka iyo taliyaasha booliska qaar ka mid ah gobollada dalka.